Igumbi Lokulala Elifushane noma Elide langasese le-B & B e-Guam - I-Airbnb
Igumbi Lokulala Elifushane noma Elide langasese le-B & B e-Guam
Hagatna, GUAM, i-Guam
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Tomoko
Ifulethi lami elinesitayela saseJapan elinamagumbi okulala amathathu lisendaweni ethule futhi emaphakathi neHagatna; uhambo olufushane oluya emanzini acwebile namabhishi ase-Guam kanye nokuya kokuzijabulisa kwasendaweni nokudla. Nginamakamelo amabili okulala engingawaqasha futhi ngihlala endaweni nekati lami elimnene, u-Bianca. Siyakuthanda ukuba nezivakashi futhi sizibonise esiqhingini sonke!
Ifulethi lami eliphethwe ngokugcwele lisesitayela sama-'70's endala kodwa lihlanzekile, linethezekile futhi lithule. Indawo ekahle ongasuka kuyo ngesikhathi sokuvakasha kwakho esiqhingini. Sitholakala phezulu kwegquma lase-Hagatna futhi sinokubuka okuhle kosebe lolwandle kanye ne-Hagatna Bay kusukela endleleni engenayo noma endaweni yokupaka.
4.95 · 67 okushiwo abanye
Ifulethi liwuhambo olufushane ukusuka e-Agana Shopping Mall lapho ungathenga khona cishe noma yini. Izindawo zokudlela ezinhle, ama-ATM, izitolo zasendaweni ezijabulisayo, izidingo eziyisisekelo zonke ziyatholakala. Futhi, kuwuhambo olula ukuya ogwini naseHagatna marina yasendaweni lapho ungahlangana khona nabadobi bendawo futhi uvakashele izitolo nezindawo zokudlela ze-Chamorro.
Ngitholakala kancane njengoba ngisebenza amahora ahlukahlukene njengonogada kwelinye lamahhotela ezinkanyezi ezi-5 e-Guam. Ngesikhathi sami sokuphumula ngiyaphuma ngingena kodwa ngihlala ngitholakala ngocingo noma ngombhalo.